About Us - Hebei TOP-METAL I / E CO., LTD
TOP-METAL Faritany Shina fantatra ho toy ny mpitarika mpamatsy, mpanamboatra sy Distributor TAPAKA FANTSONA firaisana manome vahaolana ho an'ny solika sy ny entona orinasa sy ny orinasa ao an-tokantrano vokatra faritra sy tany ivelany. Product ny fiaretana ao amin'ny API 5L miray volo, LSAW, SSAW Steel Sodina sy ny fantsona vy sodina, isan-karazany Anti-manimba tsikelikely fantsona sy Fittings 3PE ohatra mifono vy API 5L sodina, PTFE Liner sodina, FRP rivotra, mankao sodina. Other Accessories amin'ny fantsona vy sy ny ohatra karbaona Stainless vy flange, Butt-welding Fittings, sandoka Fittings, kofehy nonon'ny sodina sy ny faladia sns Mba hanome vokatra avo lenta, ny 5 milentika mitsangana milina foibe dia afaka manohy marina faritra be toy ny isan-sary nanome , noho izany dia tonga soa faritra namboarina. Vao haingana taona, dia nandray anjara be dia be ny tetikasa avy amin'ny CNPC sy Sinopec amin'ny fanampiana avy any ivelany, Voninahitra ho antsika ny Ankasitrahan'i Supplier List.
Manenjika isika ho an'ny ambaratonga ambony vokatra sy ny asa fanompoana tonga lafatra. Ny tombontsoa sy ny antoka dia SPWG:
1. Afa-po kalitao
3. hamolavola vidin'ny
4. Great fiaraha-miasa
Manana ekipa iray be dia be ny Sales & Marketing injeniera manarona ny izao tontolo izao manontolo, ny fahombiazan'ny fitantanana sy ny zavatra sarobidy isika dia manolotra ny tolotra miavaka ho an'ny rehetra ny mpividy, ny vy sy ny fantsona vokatra.
Mba hitsena ny samy hafa fangatahana ny fantsona vokatra sy hihazona fifaninanana vidiny, TOP-METAL efa nanangana manokana Purchase Sampan-draharahan'ny, Integrated amin'ny ekipa ny teknisiana, ny loharano ny "marina" zavatra mitovy tanteraka amin'izay nisy isan-mpanjifa fepetra, manatri-maso ny famokarana ary ho azo antoka ny fiterahana ara-potoana.